April 2018 – Trend.com.mm
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်မိနေတတ်တာက စွဲလမ်းမှုတစ်ခုပဲလား ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီစွဲလမ်းမှုကိုဖျောက်နိုင်လား?စဉ်းစားစရာပါပဲ။လေ့လာချက်တွေအရ အမေရိကန်မှာဆိုရင် လူဦးရေရဲ့  ၄ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်မိနေတာကို ဘယ်လိုရပ်ပစ်ရမလဲ?
ဟဲလို… Wonder Woman ပရိသတ်တွေရှိကြလား? ဒီကနေ့ကတော့ Wonder Woman မင်းသမီးချောလေး Gal Gadot » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Hollywood, Movies, NewsLeaveaComment on ရယ်လိုက်ရင်အရမ်းချစ်စရာကောင်းသူလေး…Happy Birthday ပါ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတင်မက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာပေါက်ခဲ့တဲ့ “Descendants of the Sun” ဇာတ်ကားလေးကို ပရိသတ်ကြီးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသမီးချောလေး Song » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Korean, Movies, NewsLeaveaComment on နန်းတွင်းဇာတ်ကားအသစ်မှာ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရနိုင်တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်….
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြေပြေလည်လည်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်တစ်ဘ၀လုံးစာထိရည်ရွယ်ပြီးလက်တွဲထားကြတဲ့RS ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီဆိုတဲ့အတွဲတွေ ဟာ ဒီအချက်လေးတွေတော့ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်တာဝန်ကျေဖို့လိုပါတယ်… (၁) ကတိတည်ပါ ကတိတစ်လုံးဟာ တည်တံ့တဲ့ ပတ်သတ်မှုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on အတည်တကျတွဲဖြစ်လာတဲ့RSတစ်ခုရှိလာချိန်မှာဒါလေးတွေတော့တာဝန်ကျေပါ
မှန်ပါတယ်။ပိုက်ဆံဟာအရာအားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်မှုဟာအရာအားလုံးပါ။ပျော်ရွှင်မှုကိုပိုက်ဆံနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလည်းအရှိသားပဲ။ ဒါပေမယ့်် ပျော်ရွှင်မှုရဲ့အကြောင်းရင်းခံတွေဖြစ်တဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းအချို့ကိုတော့ ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး စက်ဘီးပေါ်မှာငိုရတာထက် BMW ပေါ်မှာငိုရတာကသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်လေ..အဲ့ဒီ့ BMW » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ပိုက်ဆံများများဝင်ချင်သူတွေ ဒီအချက်တွေရှောင်ရှားသင့်
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှစ်သက်ကြတယ် မေတ္တာရှိကြတယ်၊ နောက်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့ထိတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ရည်ရွယ်ထားကြတဲ့စုံတွဲတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုးအရာတွေကို လုပ်ဆောင်ထားသင့်သလဲဆိုတာ… (၁) နှစ်ဖက်မိဘရဲ့အခြေနေအ၀၀ကို အချင်းချင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြာထားသင့်ပါတယ် လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on လက်ထပ်ဖို့ထိရည်ရွယ်ထားတဲ့စုံတွဲတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာလေးတွေက
ယောင်္ကျား လေးတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ချို့သောကိစ္စတွေကို အမှန်တိုင်းပြောဖို့ခက်ခဲကြတဲ့ အခြေနေမျိုးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေက တမင်သက်သက် လိမ်ချင်လို့လိမ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ တစ်ချို့အရာတွေကတော့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ယောင်္ကျားလေးတွေအမှန်တိုင်းပြောရခက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက
ချစ်သူတစ်ယောက်ကောက်ရလိုက်ပြီဆိုပါတော့၊ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတာမကြာသေးဘူးရက်ပိုင်း၊လပိုိင်းပဲရှိသေးတယ်.. ပူပူနွေးနွေးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ချစ်သူကလေးကို တုန်နေအောင်ချစ်တယ်ဘာညာဆိုပြီး ပျားရည်ဆမ်းကာလတွေမှာပျော်မြူးကြည်နူးနေရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ သင်သာသူ့ကိုတကယ်ချစ်လို့တဘဝလုံးစာအတွက်လက်တွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ခုလိုပူပူနွေးနွေးအချိန်မှာ သူ့ကိုမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ဘာလို့ ပူပူနွေးနွေးအချိန်မှာမေးသင့်တာလဲဆိုတော့ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on သင့်ရဲ့အသစ်စက်စက်ချစ်သူလေးကို သေချာပေါက်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတွေ
မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကိုမချစ်ဘူးရယ်မရှိကြပါဘူ။ မိဘတိုင်းအချစ်ကြီးတတ်ကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ ကွာတာက ချစ်ပုံချစ်နည်းလေးပါပဲ၊ ဆိုတော့ကိုယ့်သားသမီးကိုချစ်တဲ့မိဘတိုင်းမလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ချို့ကဘာတွေလည်းဆိုတာ… (၁) ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအပြစ်ပေးတာ သားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာဆုံးမသွန်သင်မှုနဲ့နာယူမှုဆိုတာမျိုးပဲရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အရာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in LifestyleLeaveaComment on ကိုယ့်သားသမီးကိုတကယ်ချစ်တဲ့မိဘတိုင်းမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေက